Wafdi ka socda Liibiya oo Muqdisho tagey kulana la qaatey Madaxweynaha DKMG – SBC
Wafdi ka socda Liibiya oo Muqdisho tagey kulana la qaatey Madaxweynaha DKMG
Wafdi balaaran oo ka socda wadanka Liibiya ayaa socdaal shaley galinkii dambe ku tagey magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, kuwaasi oo kulamo kala duwan la qaatey masuuliyiinta dawlada KMG oo uu ugu horeeyo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Wafdigan ayaa waxaa hogaaminayey Cabdinaasir Mansuur ah oo ka mid ah masuuliyiinta golaha qaranka KMG ee Liibiya oo xiligan dawlad ahaan u matalaya dalka Liibiya.
Xarunta madaxtooyada ayaa waxaa wafdigan ku qaabilay madaxweynaha dawlada KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyagoo ka wada hadley arimo kala duwan oo ay ka mid yihiin xiriirka Soomaaliya & Liibiya, isbadaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay Liibiya & Soomaaliya iyo sidii loo sii ambaqaadi lahaa wanaajinta xiriirka labada dal.
Masuul ka tirsan xafiiska madaxtooyada Soomaaliya ayaa u sheegay SBC in wafdiga Liibiya ay uga mahadceliyeen madaxweyne Sheekh Shariif aqoonsigii dawlada KMG ay siisey xukuumada KMG ee Liibiiya, waxaana uu soo gaarsiiyey Madaxweyne Sheekh Shariif dhambaal uu uga sidey Hogaamiyaha golaha qaranka KMG Liibiya Mustafa Cabdi Jaliil.
Sheekh Shariif ayaa isaguna shacabka Liibiya ku amaanay uguna hambalyeeyey sida uu sheegay inay iska qaadaan dhibaatadii haysatey.
Wafdigan Liibiya ka socda ayaa ah kii ugu horeeyey ee yimaada magaalada Muqdisho tan iyo markii qulqulatooyinka iyo dagaaladu ka bilowdeen dalka Liibiya isla markaana uu ku geeriyoodey hogaamiyihii Jamaahiyada Liibiya Col. Mucamar Al-Qadaafi.
Aktoober 25, 2011 at 4:05 pm
Qolada Liibaya Qabsatay ee Xunka ka Tuurtay Col Qadafi waxay Ilatahay kuwo Aan lagu Dedegi Donin Qaab Dawladeedkooda in la Aqoonsado marka la fiiriyo Dhinaca Xuququl Isaanka iyo Qaab Dhaqameedkoda ku Aadan Hawlgalka Meleteri ee ay ka Sameyeen Wadankoda.
Maxamad cali aadan says:
Aktoober 26, 2011 at 12:01 pm
Anigoo ah aqonyahan somali una nol dalka chaina ayaa kaxumaday arimaha katagan dalkena somali ayadoo dalkena lagu sodulay contact from pafanapafan marakani all somali.net